विद्या वालन गर्भवती ? - बलिउड - साप्ताहिक
विद्या वालन गर्भवती ?
असार १८, २०७४
हेमा मालिनीकी छोरी इशा देओल आमा बन्न लागेको समाचार पुराना नहुँदै अभिनेत्री विद्या वालन पनि गर्भवती भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हालै विद्याका केही तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्, जसलाई देख्ने जो कोहीले उनी गर्भवती भएको अनुमान लगाउन सक्छन् ।
ती तस्बिर मुम्बईस्थित एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोमा खिचिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका ती तस्बिरसँगै विद्या वालन आमा बन्न लागेको प्रतिक्रिया आएका छन् । विद्याले निर्माता सिद्धार्थ राय कपूरसँग सन् २०१२ को डिसेम्बरमा विवाह गरेकी थिइन् । केहीअघि सन्तान जन्माउने विषयमा राखिएको जिज्ञासामा रिसाएकी विद्या अहिले सार्वजनिक समारोहमा समेत देखिन छाडेकी छिन् ।
उनी अहिले चलचित्रमा सक्रिय पनि छैनन् । विद्याको पछिल्लो चलचित्र ‘तुम्हारी सुलू’ प्रदर्शनको क्रममा छ ।
प्रकाशित :असार १८, २०७४
इलियाना गर्भवती ?